पोखरा, असोज १७ गते । विश्व अहिंसा दिवसको अवसरमा पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताले धर्मको नाममा कुनै पनि शक्तिपीठमा पशुबधलाई निरुत्साहित गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । सामाजिक जागरणका
नवलपरासीको प्रतापपुर ४ प्रतापपुर ठुलोपुलमा बसको ठक्करबाट एकको मृत्यु
रबिन्द्र यादव, असोज १६ नवलपरासी । नवलपरासीको प्रतापपुर ४ प्रतापपुर ठुलो पुलमा आज बसको ठक्करबाट एक जनाको को मृत्यु भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीका प्रहरी निरीक्षक महेश्वर प्रसाद
डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिदै
काठमाण्डौ । मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सकारात्मक सुधारहुनु पर्ने माग राख्दै प्रा.डा. गोविन्द केसी अनसनमा बसिरहेका छन् । सरकारले उनको अनसनलाई त्यती प्राथमीकतामा राखेको देखिदैन् । पाँच दिनदेखि नवौं
पूर्वगृहमन्त्री घिमिरेको अन्त्येष्टी,कुशको प्रतिरुप बनाईयो
१४ असोज, काठमाडौं । ६ दिनअघि चितवनको दारेचोक गाविसमा पर्ने घोप्टेभीरबाट गाडिसहित त्रिशुली नदीमा हराइरहेका पूर्व गृहमन्त्री माधव घिमिरे र उनका भाइ प्रकाश घिमिरेको कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टी गरिएको छ
फेसबुकमा कमेन्ट गर्दा होस गर्नुस ! प्रहरी फन्दामा पर्नु होला
१४ असोज, काठमाडौं । प्रहरीले सामजिक सञ्जालमा अपशब्द प्रयोग नगर्न सबैलाई सचेत गराएको छ । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले विज्ञप्ति जारी गरी समाजिक सञ्जालमा अश्लिल, अपशब्द र अनावश्यक कमेन्टको
‘विनोद चौधरीको निधन’ हल्ला ,सत्य नभएको पुष्टी
१३ असोज, काठमाडौं । ठेगाना समेत नखुलाएको एउटा समाचार साइटले नेपालका एक मात्र अरबपति विनोध चौधरीको निधन भएको खबर प्रकाशित गरेपछि केही समय विश्वभरका नेपालीहरुलाई उनको निधन नै भएको भनेर
मेरो लागि माला, खादा र बधाई छाप्ने काम नगरौँ : गगन थापा
काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कुनै पनि किसिमको कार्यक्रमहरुमा माला, खादा लगाइदिने, पत्रपत्रिकामा बधाई छपाउने जस्ता कार्यहरु नगरिदिन आग्रह गरेका छन् । उनले मध्यमाञ्चल जाने क्रममा कोहलपुरमा ठुलो माला लगाइदिएपछि
गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिकमा गम्भीर विवाद
१३ असोज, काठमाडौं । सरकारमा जाने विषयमा विजय गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिकमा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ । गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जान खोजेका छन् भने अन्य नेता उपप्रधानमन्त्री नपाए पनि
गुल्मीको पिपलधारामा दशैँ विशेष साँस्कृतिक कार्यक्रम हुने
गोविन्द वस्नेत, वुटवल१२ , असोज विजया दशमी तथा सुभ दिपावलीको अवसर पारी अन एयर मिडिया सेन्टर वुटवलले गुल्मीको पीपलधारा गा.वि.स मा दशैँ विशेष वृहत साँस्कृतीक कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
एक साताभित्रै संविधान संशोधनको प्रकृया अघि वढ्ने:केसी
१२ असोज, विराटनगर । सहरी विकासमन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले एक साताभित्रै संविधान संशोधनको प्रकृया अघि वढ्ने वताएका छन । सरकारले मधेसी मोर्चाले उठाएको उचित मागलाई सम्वोधान गर्न दशै अगावै संविधान
के सम्बन्ध थियो पप गायक नबिन र पूर्व युवराज पारसको ?
काठमाडौं । गायक नबिन के भट्टराईले पूर्व युवराज पारस शाह आफ्नो स्कुलको साथि भएको भन्दै फेसवुकमा फोटो पोष्ट गरेका छन् । उनले धेरै बर्षपछि शाहसँग भेट्न पाउँदा आफूलाई निकै खुसी
एजेन्सी- कोरोनाले बेहाल बनेको अमेरिकामा अहिले देशभर चलेको आन्दोलनको आँधीबेहरीले अशान्त बनेको छ । मिनोपोलिस